पहिलो पटक रजस्वला हुँदा देखिने समस्या के-के हुन् ? | latestnepali.com
पहिलो पटक रजस्वला हुँदा देखिने समस्या के-के हुन् ?
रजस्वला किशोरी अवस्थााबाट शुरु हुन्छ । साधारणतया १० देखि १५ वर्षसम्मका किशोरीहरुमा रजस्वला शुरु हुन्छ भने ४५ देखि ५५ वर्षको उमेरमा रजस्वला बन्द हुन्छ । महिनावारी हुनु भनेको महिलाहरु प्रजनन गर्न सक्ने उमेर वा गर्भवती हुन सक्ने उमेरमा प्रवेश भएको अवस्थाको संकेत पनि हो । महिलाहरुको डिम्बाशयबाट इस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टोरोन हर्मोनहरु उत्पादन हुन्छ ।
पाठेघरको भित्री तहमा यसकको प्रभावद्धारा विस्तारै बढ्दै जान्छ र पाठेघरको तह बाक्लो हुन्छ । करिब १४ दिनमा डिम्बाशयबाट एक डिम्ब निस्किन्छ र उक्त डिम्ब परिपक्क भएको डिम्ब शुक्रकीटबाट निसेचित भएमा गर्भ रहन्छ तर यदि निसेचित नभएमा गर्भ रहँदैन र सो तहको कुनै प्रयोजन हुँदैन ।
त्यसपछि डिम्बासयबाट उत्पादन हुने हर्मोनह पाठेघरको भित्री तहमा तुहिन्छ । यसरी भित्री तह तुहिएर रगत आउँछ जसलाई रजस्वला भनिन्छ ।
पहिलो पटक रजस्वला हुँदा यस्तो समस्या देखिन सक्छ
पहिलो पटक रजस्वला भएका किरोशीहरुमा योनीबाट रक्तश्राव हुन्छ । कोही किशोरीमा बढी रक्तश्राब हुन्छ भने कसैमा कम पनि हुनसक्छ । रजस्वला हुँदा महिलाहरुको तल्लो पटे तथा ढाड दुख्ने समयस्या हुन्छ । यस्तै रजस्वलाको समयमा अल्छिपना आउने, टाउको दुख्ने, रिङ्गाटा लाग्ने, खान मन नलाग्ने समस्याहरु आउँछ ।
कतिपय किशोरीहरुलाई रजस्वलाको समयमा मानसिक तनाव पनि हुनसकछ । यस्ता समस्याहरु धेरैजस्तो आफै ठीक हुन्छ । विशेषगरी पहिलो पटक रजस्वाला भएका किशोरीहरुमा रजस्वला सम्बन्धी ज्ञानको कमीले उनीहरुको मनस्थितिमा प्रभाव पार्ने गर्छ । रजस्वालको समयमा हुने सामाजिक तथा धार्मिक कुराले पहिलोपटक रजस्वला भएकी किशोरीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले रजस्वला हुने उमेरमा पुगेकी किशोरीहरुलाई रजस्वलासम्बन्धि ज्ञान र परामर्श दिनुपर्छ ।
दरबार हत्याकाण्डको १८ वर्ष : कसले गर्‍यो राजा वीरेन्द्रको वंश नाश?